Tareenka + Hawada: Air France waxay dib u xaqiijineysaa ka go'naanshaha waaritaanka deegaanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » France Breaking News » Tareenka + Hawada: Air France waxay dib u xaqiijineysaa ka go'naanshaha waaritaanka deegaanka
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • France Breaking News • Investments • News • Safarka Tareenka • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Maaddaama rakaabku ay sii kordhayaan dalbashada xulashooyinka safarka ee deegaanka u habboon, Air France waxay ilaalinaysaa dakhligeeda mustaqbalka iyadoo dejineysa xalal macno leh.
Air France waxay balaarineysaa barnaamijkeeda 'Tareenka + Cirka'.
Balaadhinta Air France waxay muujineysaa talaabooyinka halista ah ee shirkada xamuulku qaadayso si loo yareeyo qiiqa kaarboon.
Air France waxaa ka go'an yareynta qiiqa duulimaadkeeda gudaha 50% sanadka 2025 heerarka 2019.
Ballaarintii ugu dambaysay ee Air FranceBarnaamijka '' 'Tareenka + Cirka' 'wuxuu muujinayaa sida ay uga go'antahay adkeynta deegaanka. Maaddaama rakaabku ay sii kordhayaan dalbashada xulashooyinka safarka ee deegaanka u habboon, shirkaddu waxay ilaalinaysaa dakhliyadeeda mustaqbalka iyada oo dejinaysa xalal macno leh.
In kasta oo aysan ahayn qorshe cusub, ballaadhinta Air France waxay iftiimineysaa tallaabooyinka halista ah ee uu sidey qaadayso si loo yareeyo qiiqa kaarboon. Air France waxay ballan qaaday inay yareyneyso qiiqa duulimaadkeeda gudaha 50% illaa 2025 marka loo eego heerarka 2019 talaabooyinkan ayaa muhiim u ah tan. Toddobo waddo oo dheeri ah ayaa lagu daray 18-na waa la sii ballansan karaa hadda. Iyaga oo bixinaya hal tigidh, dhibco daacad ah, iyo ilaalin la xiriirta, diyaaradda ayaa sameysay barnaamij bey'adeed u roon oo si aad ah u soo jiita rakaabka, iyada oo abuuraysa hawlgal gaadiid ku meel gaadh ah oo ku habboon mustaqbalka.
Socotada waxay u badan tahay inay saameyn ku yeeshaan sida bey'ad ahaan ugu habboon badeecad ama adeeg. Sahanka Warshadaha Q1 2021 ee Sahamiyaha Macaamiisha ayaa shaaca ka qaaday in 76% jawaabeyaasha caalamka ay yihiin 'had iyo jeer', 'badiyaa', ama 'mararka qaarkood' saameyn ku leh qodobkaan, taasoo u kordheysa 78% jawaab bixiyaasha Faransiiska.
Air France ayaa aqoonsaday suurtagalnimada sii kordheysa ee ah in rakaabku u wareegi doonaan ikhtiyaarro safarro ah oo deegaanka u roon oo la mari karo waddooyinka gaagaaban, gaar ahaan tareenka, iyada oo la ogyahay in dhaqdhaqaaqa ceebta duulimaadku uu xoog ku yeeshay guud ahaan Yurub. Istaraatiijiyaddan hormuudka u ah warshadaha waxay bixin doontaa macaashka lagu ilaalinayo sumadda sumadda side sannadaha soo socda, iyadoo la yareynayo howlaheeda duulimaadka.
Qaar badan oo ka mid ah marinnada dhaadheer ee xamuulku waxay ku tiirsan yihiin quudinta gudaha ee garoomada diyaaradaha ee gobolka, qorshahani wuxuu hubinayaa inuusan lumin rakaabkan aadka loogu baahan yahay. Isaga oo si firfircoon uga hadlaya mawduuca waara, xambaarahu wuxuu ku adkeyn doonaa joogitaan xoog leh qaabkan ka hor tartamayaasha wuxuuna noqon karaa hawlwadeenka gaadiidka is-dhexgalka xulashada ee gudaha Faransiiska.
Safarka tareenka ayaa ahaa doorashada labaad ee ugu caansan ee gaadiidka, wadada gadaasheeda, safarada gudaha ee gudaha Faransiiska sanadka 2019 oo loo adeegsaday 17.4% (29.3 milyan) oo safar ah. Waxaa la sii saadaaliyay in marka la gaaro sanadka 2025 ay tareenka noqon doonaan 18% ee safarada gudaha, wadar ahaan 31.4 milyan oo safar ah.
Safarka tareenka ayaa caan ku noqday dhawaanahan, iyo shabakad xawaare sare leh oo ku baahsan Faransiiska, waxaa lagu wadaa inay noqoto mid caan ah. Iyada oo suuq-geynta gaagaaban ay u badan tahay inuu qaado dhibaatadii ugu weyneyd sanadaha soo socda, gaar ahaan iyadoo Dowladda Faransiiska ay mamnuuceyso marinnada waddooyinka qaarkood, istiraatiijiyaddan xariifka ah waxay xaqiijin doontaa in Air France loo arko hoggaamiye gaadiid dhex dhexaad ah. Ballaarinta barnaamijka 'Air + Rail' ee Air France ayaa sii xoojineysa tallaabooyinka halista ah ee ay diyaaradda qaadaneyso si ay u noqoto mid bey'adeed u wanaagsan, iyadoo u oggolaaneysa shirkadda in loo arko inay tahay hay'ad horumar leh oo si dhab ah u daneysa sii jiritaanka.
Australia ayaa dib u furi doonta xuduudkeeda si si buuxda loo tallaalo ...
Warbixinta cusub ee WTTC waxay bixisaa talooyin maalgashi ...
Dhulgariir xooggan oo cabirkiisu yahay 6.1 ayaa ku dhuftay aagga Tokyo, maya ...
Adeeggii ugu horreeyay ee Seaplane ee u dhexeeya Boston Harbor iyo ...
Duulimaadkii Johannesburg iyo Cape Town ee Koonfur Afrika ...
Booqdayaasha ayaa wajahaya xayiraadyo socdaal oo cusub oo loogu talagalay Hawaii
IGLTA waxay u dooratay guddoomiyihii ugu horreeyay ee Kolombiya guddoonkeeda ...
Duulimaadyo cusub oo ka imanaya Ontario ilaa Austin oo ku yaal Koonfur -galbeed ...
Qalabka Badbaadada Dalxiiska Cusub ee Booliska Spain ee Camino ...
Hawaii oo ka Warbixisay Burburkii Fulkaanaha Cusub